Hidhattoonni al-Shabaab buufata poolisii Keenyaa haleelan - BBC News Afaan Oromoo
Hidhattoonni al-Shabaab buufata poolisii Keenyaa haleelan
Gareen Islaamummaa somaaliyaa al-Shabaab Kaaba Bahaa Keenyaa keessatti naannoo Waajiir jedhamtutti haleellaa raawwateera.
Haleellaan kunis buufata poolisii naannoo sanatti argamurratti akka ta'e gaazexaan biyya keessaa gabaaseera.
Gaazexeen Daayilii Neeshiin jedhamu akka gabaasetti, gareen Islaamummaa somaaliyaa al-Shabaab kun naannoo Wajiir gara Kibbaatti kan argamtu buufata poolisii Dajabulaa irratti yommuu ta'u kunis kan raawwatame Roobii ganama ture.
Hidhattoonni kunneen haleellaa kana yeroo qaqqabsiisanitti madfiifi laawoncheerii dabalatee meeshaalee waraanaa gurguddoo fayyadamuun isaaniis himameera.
Gumruuk ji'oota 14 darban meeshaa waraanaa 'kuma 117 ta'u' to'ate
Miseensonni ABIN'fi haati warraa Asaamminoo Tsigee gadhiifaman
Aanga'aan naannoo sanaa tokko waa'ee haleellaa sanaa akka jedhanitti, gareen warra Islaamummaa kun buufata poolisii kana irratti kan xiyyeeffateef, miseensonni isa lama to'ataamanii buufata sana keessatti waan argamaniitiif jedhameera.
Haleellaa sanaa booda dhukaasa gamaafi gamasiin tureen miseensonni al-Shabaab alama buufata poolisii sanatti hidhaarra turan kan ajjeefaman yoo ta'u, miseensonni poolisii lamaafi hidhataa naannoo sanaa nama ta'e tokko ammoo madaa'aniiru.
Miseensonni paartii ABIN'fi 'Baaladaraa' Shororkeessummaan shakkamuun hidhaa turan gadhiifama
27 Caamsaa 2019
Humni qilleensaa Itoophiyaa Al-shabaab irratti haleellaa raawwadhe jedhe
Dargaggoo namoota abbaasaa gara jabinaan ajjeesaniif dhiifama taasise